''Addi Bilisummaa Oromoo duris shororkeessaa miti'' - BBC News Afaan Oromoo
Bara 2011 A.L.A tti Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee dhaabotni siyaasaa kan akka ONLF fi Ginboot 7 paarlaamaa Itoophiyaatiin shororkeessitoota jedhamuun tarreeffaman.
Kanumaan, seerri farra shororkeessummaa biyyattiitti bahe namoota dhaabbilee kanaa wajjin hidhata qabu jedhaman hidhaaf, ajjeechaafi daraaraaf saaxile.
Mormii Oromiyaa keessatti dhuma bara 2015 A.L.A qabee finiineen, namootni hidhaman kunneen akka hiikamaniif rogeeyyii, quuqamtoota mirga dhala namaa fi baayyinaan qeerroo naannoo Oromiyaatiin dhiibbaan taasifamaa turuunsaa ni yaadatama.
Tibbana manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa waggaa torba booda dhaabbilee tarree shororkeessumma irra kaa'e ture, sichii shororkeessitoota mitii jechuun maqaa irraa haqeera. Kuni namoota maqaa ABO tiin himatamanii hidhamanii turaniif hiika maalii qaba?
'ABOn duraanuu shororkeessaa miti'
Uummata saamuuf garboomfachuuf waan mootummaan abbaa irree raawwate malee ''Kaayyoon Adda Bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo bilisoomsuufi mirga uummataa kabachiisuudha,'' jedha
ABO deeggarta jedhamee waggaa kudha shan irratti murtaa'uun hidhaa waggaa sagalii booda bara 2016 tti hidhaa irraa kan bahe Habtaamuu Deesaan.
Shororkeessaa kan jedhaman warreen gabaa keessatti faa dhukaasa banani malee ABO shororkeessa akka hin taane addunyaanuu beeka jedha Habtaamuun.
''Dhala Oromoo tahee kan ABO hin deeggarre hin jiru'' jechuunis dubbata.
Ijoollummaasaatii qabee akka ABO deeggaru kan himu.
Akka of baruufi ilmaan Oromoo mara ija tokkoon akka ilaalu kan na godhe dhaaba kana dha, kaayyoo koo gara fuulduraatis jedheera.
Erga waraabessi darbee...
Amma Keeniyaa keessa baqattummaan kan jiraatu, maqaansaa akka dhahamu kan hin barbaanne, heera biyyatti humnaan diiguuf jedhamuun al sadii caala hidhamaa hiikamaa ture.
Biyya keessatti baqachuu fi dhokachuu waanin dadhabeef barumsa koo yunivarsiitii Hawaasaatti baradhu dhiisee bara 2011 gara biyya hambaatti baqadhe jedha.
ABOn tarree shororkeessummaa keessaa baasuun barfateera jedha.
''Erga ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararameefi biyyaa faca'ee booda tahuunsaa nama gaddisiisa'' jedheera seerri shororkeessummaa illee harki dheeraa dha, biyya irra darbee Keeniyaa fi Taanzaniyaa keessatti ilmaan Oromoo ittiin qabamaa turan.
'Nuyi warri biyyatti hidhamne immoo seeratti illee dhiyaannee hin beeknu, maatiin iddoo hidhamnu hin beeku ture,' jedha.
Inumaayyuu seerri farra shororkeessummaa otoo hin bahinii fi ABO'n tarree shororkeessaa keessa otoo hin seeniin dura hidhamaa turres jedha.
Sirba ABO dhaggeeffattan jedhaniifaa Oromummaa keenyaan nu hidhaati turaniis jechuun waan yeroos tahe yaadata
Habtaamuun gama isaatiin ragaa tokko malee ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawwan dararaa argaa akka turan himee, duras shororkeessaa kan jedhe mootummaa abbaa irree dha ammas kan kaasu isaanii jedha.
'Qabsoon Itti fufa'
''Kana booda uummatni Oromoofi qeerroon dammaqee jira'' kanaaf ABOn tarree shororkeessumma jalaa bahees bahuudhaa baatees hiika hin qabu.
Namni ABO jedhamee hidhamus hin jiraatu, labatni kuni tole hin jedhu. jechuun BBC tti kan hime.
Warreen tika biyyatti ''nu faana yoo hojjette malee jedhanii dhaabii taa'ii na dhorkinaan'' biyyaa bahee kan jedhu Habtaamuun, akka deeggaraa Adda Bilisummaa Oromootti mirgi uummata Oromoo kabajamuu qaba, qabeenyi uummata Oromoo saamamuu hin qabu, biyya keenya irratti abbaa biyya tahuu qabna kanaaf falmachuu itti fufna jechuun dubbata dargaggeessi kuni.
Adda Bilisummaa Oromoo shororkeessaa akka hin taane kaleessas ijaa beeknuuf ijoolleen Oromoo jalatti hiriirree mirga keenyaaf falmachaa turre yoo jedhu. Amma maqaa shororkeessaa jedhu irraa kaasuun dansa jedheera.